Wisdom of Dhamma: လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ခွင့်
မလေးရှား၌ ရှိနေစဉ် တနေ့မှာ ဒကာတစ်ဦးက မေးပါတယ်။ “အရှင်ဘုရား၊ တပတ်တခါ ဒါမမဟုတ် သတ်မှတ်ချိန်တိုင်း၌ ဝတ်ပြု ဝတ်တက် မလာပါက ငရဲကို မလွဲမသေ ရောက်စေ လို့ ဟောထား ပညတ် ထားတဲ့ သုတ်တော်များ ရှိပါသလား” တဲ့။ သူက ဆက်ပြောပါသေးတယ်။ အခြားဘာသာတွေမှာတော့ အဲဒီလို ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ သတ်မှတ်တဲ့ နေ့တိုင်းမှာ မဖြစ်မနေ သွားပြီး ဝတ်တက်ကြတယ်တဲ့။ သူ့စေတနာ သူ့ဆန္ဒကတော့ ကျောင်းကို လူတွေ တစ်ပတ်တစ်ရက် သို့မဟုတ် နှစ်ရက် လာရောက် ဝတ်တက် ဝတ်ကပ် ပြုစေချင်တာပါပဲ။
ဒါပေမဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာက အဲဒီလို ပညတ်ထားတာ မရှိပါဘူး။ သူ ပညတ်ထားတာကို ဖေါက်ဖျက်လို့ ဒဏ်ခတ်တယ် ဆိုရင် မဟာကရုဏာတော်ရှင် ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကို မေးခွန်းထုပ်စရာတွေ ဖြစ်လာတော့ မပေါ့။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာက သူ့အလိုလိုက် သူ့ အကြိုက် ဆောင်လို့ ဆုတော် လာဘ်တော် ပေးသနား ချီးမြှင့်တာမျိုးလဲ မရှိပါဘူး။ သူပြောတဲ့ အတိုင်း မလုပ်လို့ ဖြစ်စေ၊ သူ့ကို ပြန်ဝေဖန်လို့ ဖြစ်စေ မင်း ငရဲသွားပြီး ဆင်းရဲဒုက္ခ ခံစေဆိုတဲ့ ပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်း မျိုးလဲ မရှိပါဘူး။ ကောင်းတာကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မကောင်းတာကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် သက်ဆိုင်သူဟာ လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ခွင့်၊ ပြုမူခွင့် ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ရွေးချယ် ပြုလုပ်တဲ့ ကောင်းသော မကောင်းသော အလုပ်၊ အပြုမူ (ကံ)တွေကို ကိုယ်တာဝန်ယူရမှာပါ။ “ငါသည် ကံသာလျှင် ကိုယ်ပိုင် ဥစ္စာရှိသူဖြစ်၏။ ကံအမွေကို ခံရသူဖြစ်၏။ ကံဟူသောအကြောင်းရင်း ရှိသူဖြစ်၏။ ကံဟူသော ဆွေမျိုးရှိသူဖြစ်၏။ ကံသာလျှင် မှီခိုရာ ရှိသူဖြစ်၏။ ကောင်းသောကံကို ပြုသည် ဖြစ်စေ၊ မကောင်းသော ကံကို ပြုသည်ဖြစ်စေ ငါသည် ထိုကံ၏ အမွေကို ခံယူရပေလိမ့်မည်” လို့ အဘိဏှ ပစ္စဝေက္ခိတဗ္ဗဌာနသုတ်၊ ပဉ္စကနိပါတ်၊ အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်မှာ ဟောထားတာက ဒီသဘောပါ။
ဒါကြောင့်မို့ ကောင်းတာကို လုပ်ချင်လဲ လုပ်လို့ရတယ်။ မကောင်းတာ လုပ်ချင်သပဆိုရင်လဲ ရပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်ခွင့် ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ရွေးချယ်မှုနှင့် တွဲပါလာတဲ့ တာဝန်ရှိမှုနှင့် ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ် (ကံတရား)ရဲ့ ကောင်ကျိူး ဆိုးပြစ်ကိုတော့ ကိုယ် လက်ခံရမှာပါ။ ထိုနည်းတူပါပဲ။ ဒုက္ခခပ်သိမ်း ကင်းလွတ်ငြိမ်းရာ နိဗ္ဗာန်ကို ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်လဲ ကိုယ့်အပေါ် မူတည်ပါတယ်။ ဒီလိုမဟုတ်လို့ “သံသရာဝဋ်ထဲ၊ မကျွတ်ဘဲ နေနေ၊ ဇွတ်ဆွဲလို့ တပေပေ” လုပ်ချင်သေးသပ ဆိုရင်လဲ ကိုယ့်အပေါ်မူတည်တာပါပဲ။ နိဗ္ဗာန်ကို အရောက်လှမ်းရာမှာပင် ပုံစံငါးမျိုးထဲက ကြိုက်တာကို ရွေးချယ်ပြီး သွားပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။ (၁) ပကတိသာဝက အဖြစ်နှင့် သွားမလား၊ ဒါမမဟုတ် (၂) မဟာသာဝက၊ (၃) အဂ္ဂသာဝက၊ (၄) မဟာဗောဓိ (ဘုရားအဖြစ်)၊ (၅) ပစ္စေကဗောဓိ ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ငါးမျိုးမှာ ကြိုက်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင် ရွေးချယ်ပြီး နိဗ္ဗာန်ကို သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ရွှေးချယ်မှုနှင့် အတူပါလာတဲ့ ပါရမီဖြည့်မှုဆိုတဲ့ တာဝန်ကိုတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ ယူရမှာပါ။ ဘယ်လူ ဘယ်နတ်ကမှ ရောက်စေ၊ ဖြစ်စေဆိုပြီး ဆုပေးလိုက်လို့ ရောက်သွားတာမျိုး ဖြစ်သွားတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ You should do your work, for the Tathagatas only teach the way လို့ (Dhp. XX4မှာ) ဗုဒ္ဓ ဟောတော်မူထားတာ ရှိတယ် မဟုတ်ပါလား။
အဲဒီလိုပါပဲ။ လူ့လောကမှာ အောင်မြင်တဲ့သူ ဖြစ်ချင်သလား။ ကျရှုံးသူ ဖြစ်ချင်သလား။ ကြီးမြတ်သူ ဖြစ်ချင်တာလား၊ ယုတ်ညံ့သူ၊ သေးသိမ်းသူဖြစ်ချင်တာလား။ ကိုယ့်မှာ ရွေးချယ်ခွင့် ရှိပါတယ်။ ဘယ်လူ ဘယ်နတ်၊ ဘယ်အရာကမှ မင်း ဒီလူမျိုး ဖြစ်စေ၊ ဒီလောက်ဖြစ်စေလို့ ဖန်ဆင်းပေး၊ သတ်မှတ်ပေးထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်လိုလူမျိုးပဲ ဖြစ်ချင်သည် ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ သူမျိုးဖြစ်အောင်တော့ ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ထမ်း၊ ကိုယ့်လမ်း ကိုယ်ရောက်အောင် လျှောက်ရမှာပါ။ “မိမိသည်သာ မိမိ၏ အားကိုးရာ (One is one's own refuge.)” ဆိုတဲ့ ဟောကြားချက်နှင့် အညီ ကျင့်ကြံ လုပ်ဆောင်ကြရမှာပါ။ ဘယ်လောက်ထိ ဖြစ်သလဲ ဆိုတာကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ဆန္ဒ၊ ကံ၊ ဥာဏ်၊ ဝီရိယ ဘယ်လောက် ရှိသလဲ ဆိုတဲ့ အချက်တွေ အပေါ်မှာသာ မူတည်ပါတယ်။
Posted by ဘုန်းဉာဏ် at Thursday, May 20, 2010
ဘုန်းဘုန်း တပည့်တော် ယောက်ဖတော် ဒေ၀ရတ် ကျောက်မောင်းဆင်ပြီး အသေသတ်တာ ဘယ်လိုအပြစ်တွေဆိုခဲ့ပါသလဲ သိချင်စိတ် နဲ့တွေးမှိပါတယ် ဘုရား။အခက်အခဲမရှိက ကူညီပါက သိခွင့်ပြုပါဘုရား။
I don't know Chinese yet though I love to learn. Frankly speaking, I'm realy interested in all commets which were writen in Chinese.
So let me express my sincere thinks to those who have written comments not only in Burmese or English but also in Chinese.
ဘုန်ဉာဏ်ရဲ့ မှတ်ချက် အထက်က comment deleted ဆိုတာ ဘုန်းဉာဏ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ မှတ်ချက်ကို delete လုပ်ထားတာပါ။ စာလုံးပေါင်း မှားသွားလို့ လုပ်လိုက်တာပါ။ စာဖတ်သူရဲ့ မှတ်ချက်ကို ဖျက်လိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။
အထက်က ပြန်ကြားချက်မှာ ပြောခဲ့သလို စာဖတ်သူရဲ့ အမြင် သဘောထား မှတ်ချက်တွေကို လေးစားပါတယ်။ မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်။